Home Wararka Wasiir Sadiiq Warfaa oo shir caalami uga qeyb galay France
Wasiir Sadiiq Warfaa oo shir caalami uga qeyb galay France
Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Sadiq Xirsi Warfa ayaa ka qeybgalay shir weynaha mustaqbalka shaqada oo maanta ka furmay Magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska.
Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada ayaa shirka ku soo bandhigaya dadaallada xukuumadda Soomaaliya ee xal u helida shaqo la’aanta.
“Xukuumadda iyo wasaaradda aan hoggaamiyo ee mas’uulka ka ah shaqada waxay dadaal muuqda sannadkii u dambeeyay galisay sidii loo heli lahaa fursado shaqo, taas ayaana ah midda aan ka duuleynayo maaddama tirada ugu badan ee bulshadeennu ay dhallinyaro yihiin.” ayuu yiri Wasiir Sadiq.
Shir weynaha ayaa inta uu socdo qodobbada kale ee diiradda la saarayo waxaa ka mid ah sida ugu dhow ee ay u wada shaqeyn karaan Dowladda, Loo shaqeeyaha iyo Shaqaalaha, si wada jir ahna uga shaqeyn karaa horumarka dalka.
Farmaajo oo ku adkeeysanaya in lagu martiqaado (Saudi & Africa Summit)-Abriil 2022
Farmaajo oo Qatar ka codsaday in lala heshiisiiyo Kenya! Maxaa soo kordhay?
Xalka kaliya ee looga gudbi karo Doorashada Boobka ah & muddo kororsiga dadban
St. Cloud artist’s Somali affirmation cards designed to promote self love, foster connection
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - December 6, 2021
ST. CLOUD — In an office space downtown St. Cloud artist Anisa Hagi-Mohamed spread a set of colorful rectangular cards across the table in front...
AMISOM and Somali National Army (SNA) soldiers conclude intelligence gathering training
Twenty military officers from the African Union Mission in Somalia (AMISOM) and the Somali National Army (SNA) have concluded a four-day intelligence gathering training...
Foreign navies OKd to fight Somali pirates
Cabdifatax Ibrahim (Ronaldo) - December 5, 2021
UNITED NATIONS: The UN Security Council voted unanimously Friday (Saturday in Manila) to allow international naval forces to continue using all necessary means to...
Refugee from Somalia and her supporters are taking family’s case to PM’s office
An unofficial delegation will try to present a petition with almost 13,000 signatures calling for a special permit to reunify Nasro Mohamed with her...
British Government Advises Against Visit to Somaliland
The British Foreign, Commonwealth & Development Office today issued a travel advice for its citizens in North Somalia. “For security reasons the FCDO advises against...
Farmaajo oo Qatar ka codsaday in lala heshiisiiyo Kenya! Maxaa soo...